प्रचण्डले मासु पकाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल, एकाएक कसरी लिक भयाे फाेटाे ? — Imandarmedia.com
प्रचण्डले मासु पकाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल, एकाएक कसरी लिक भयाे फाेटाे ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक जीवनमा सायदै यति धेरै फूर्सदका दिनको सदुपयोग गरेका थिए होला । युद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रिया हुँदै सामान्य राजनीतिक अवस्थामा पनि उनको व्यस्तताको सीमा नै थिएन । परिवारका लागि उतिसाह्रो समय दिन पाएका थिएनन् ।
विहान उठेपछि केही समय व्यायामबाहेक विहान ८ बजेदेखि राजनीतिक कर्ममा नै अभ्यस्त हुने प्रचण्डलाई कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लक डाउनले परिवारका सदस्यसँग दैनिकी बिताउने गज्जबको मेसो बनाएको छ ।
खासगरी स्वास्थ्यका हिसाबले कमजोर रहेकी पत्नी सीता दाहालका निम्ति उनले पर्याप्त समय निकाल्न पाएका छन् भने परिवारका अन्य सदस्यसँग पनि सोही हिसाबमा सामिप्यको व्यवाहार गर्न पाएका छन् ।
लक डाउनका समयलाई उनले खेर फालेका छैनन् । विहानको दैनिकीसँगै साइकल चलाउने, पत्नी सीतालाई निवासको कम्पाउन्डमा घुमाउने, राजनीतिक व्यक्तित्वसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरी मुलुकको विषयमा परामर्श गर्ने, अर्गानिक खाना पकाउन आफैं भिँड्नेसम्मका काममा प्रचण्ड व्यस्त हुन्छन् ।
हरेक दिन विहान ५ बजेदेखि आधा घन्टा नेपाली पुराना गीत सुनेर दैनिकी सुरु गर्ने प्रचण्डले परिवारमा पनि नयाँ नियम बनाएका छन् । उनले भनेका छन्, हामी भएको खण्डमा विहान मांसाहारी खाना खाने, बेलुका शाकाहारी खाने भनी अभ्यास गरेका छौं ।
यसको पनि खास कारणबारे उनी थप खुलेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न नदिन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका निम्ति मसलेदार खानामा नै जोड दिने गरेको उनी बताउँछन् ।
प्रचण्डले यहि मौकामा दाउराबाट पकाएर खान थालेको पनि खुलासा गरेका छन् । पकाउने काममा उनी आफैं लागि परेकाे तस्बिर सार्वजनिक भएपछी भाइरल बनेकाे छ। तर उक्त तस्विर कसरी बाहिरियाे भन्ने केहि बुझिएकाे छैन । छोरी ज्वाँई गंगा दाहाल, जीवन आचार्य र प्रचण्डले खाना पकाएको तस्बिर बाहिरिएको हाे भने नातीनातिनासँग साइकिलिंग गरेको तस्बिर पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
राजनीतिक काममा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको बैठक वा पार्टीका केही विशेष काम भए मात्र लक डाउनमा सुरक्षित भएर जाने गरेको खुलासा गरेका प्रचण्ड भन्छन्, ‘दिउँसोको समयचाहिँ पुस्तक पढेर बिताउने गरेको छु ।’
महाभुकम्पले नेपालीलाई धनी गरिब वा ठूलो सानो नभनीकन एक बनाए जस्तै कोरोनाले मानव जातिलाई नै एक बनाउनका निम्ति सन्देश दिएको बताएका उनले नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले लिएको लक डाउनको निर्णय र गरेका कामको खुलेर प्रशंशा गरेका छन् ।
उनले यस्तो बेला राजनीतिक विषयमा रहेका विमतिको भन्दा पनि सरकारले गरेका कामको प्रभावकारीताका विषयमा जोड दिने, सरकारलाई सहयोग गरी अघि बढ्नुपर्ने र नागरिकले पनि सरकारले गरेको निर्णयलाई इमान्दारीताका साथ मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमप्रति सतर्कता अपनाउँदै नेकपा शीर्ष नेताहरू निवासबाहिर नगई ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा बसिरहेका छन् । नेताहरूले जोखिमप्रति समयमै सचेतना अपनाउँदै अत्यावश्यकबाहेक औपचारिक रूपमै संवाद, भेटघाट बन्द गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाहेक नेकपाका सचिवालयका अन्य सदस्य घरमै छन् । सरकार कोरोना विरुद्धको निर्णायक लडाईंमा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यस्तता चाहिँ बढेको छ । नियमति बैठक, परामर्श र निर्देशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै समय खर्चेका छन् ।
नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा सोमबार शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीका कारण नयाँ वर्षलाई कठिन परिस्थितिमा स्वागत गर्न बाध्य भएको बताएका थिए । उनले यो लडाईं सवैको एकताको बलमा जितिने बताएका थिए ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल दिनहुँ कम्तीमा तीन–चारवटा सरकारी बैठक र छलफलमा सक्रिय भइरहेका छन् । यद्यपि, उनले पनि बाहिरका व्यक्तिसँगको सम्पर्क, छलफल र भेटघाटलाई कम गरेका छन् । गृहमन्त्री थापा पनि लकडाउनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि जुटिरहेका छन् ।
नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पुस्तक लेखनमा जुटेका छन् । माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ अध्धयन र सन्दर्भ सामग्री संकलनमा छन् । नेकपाले अहिले औपचारिक सवै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले महामारीको रूप लिएपछि कांग्रेसका शीर्ष नेताले जरुरीबाहेकका भेटघाट बन्द गरेका छन् ।
घरबाहिर जिल्ला र राजधानीमा विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुने नेता भेटघाट बन्द गरेर घरमै बसेका छन् । धेरै नै जरुरी भए फोनबाटै सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सुरुआतदेखि नै सजगता अपनाउन जनमानसमा आग्रह गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासहितका नेताहरू केही दिनदेखि घरबाहिर निस्केका छैनन् । उनीहरूले सावधानी अपनाउन कार्यकर्ता र जनमानसमा पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले राजनीतिक वक्तव्य दिने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै हात धुन, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न, भिडभाड नगर्न, घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सदस्यता वितरण र नवीकरण, आन्तरिक समायोजन, ठूला भेला, कार्यक्रमहरू सबै स्थगित गरेको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू पनि कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणप्रति सचेत छन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई टोखास्थित डेरामै छन् । उनले फोनबाटै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग कुराकानी गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसबारे सचेतना गाउँमा कम भएकाले उनी नेता–कार्यकर्तालाई फोन सम्पर्कबाट आफू सतर्क रहन आग्रह गरिरहेका छन् । यसबाहेक उनले पुस्तक पढेर समय बिताउने गरेका छन् । केही दिनअघि डा.भट्टराईले ट्विटरको नाम परिवर्तन गरेर ‘नियमित हात धोऔँ’ बनाएका थिए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कोरोना भाइरसबारे सचेतना र सुझाब राख्दैसमेत आएका छन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निवासबाहिर निस्किएका छैनन् । राजपा नेता महन्थ ठाकुर कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमबाट जोगिन भेटघाट बन्द गरेर निवासमै बसेका छन ।
राजपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले पनि केही दिनयता भेटघाट बन्द गरेका छन् । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमका कारण भेटघाट ठीक नभएको भन्दै महतोले कोठामै बसेर पुस्तक पनि पढिरहेका छन् । विज्ञप्ती निकालेर नेताहरुले बेलाबेला आफ्नो पार्टीको धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।